श्रीमतीलाई प्र’योग गरेर पैसा कमाउने यी श्रीमान |
February 22, 2022 adminLeaveaComment on श्रीमतीलाई प्र’योग गरेर पैसा कमाउने यी श्रीमान
काभ्रे । पतिव्रता श्रीमती । श्रीमान्को आ’यु बढाउन धर्मकर्म र संस्कार अनुसार रीति पुर्‍याउने स्त्रीहरू । समाजलाई सभ्य र निरन्तरता दिने महिला । परापूर्वकालदेखि देवीको रूपमा चिनिँदै आएका ।आफ्नै श्रीमतीलाई प्र’योग गरेर पैसा कमाउने श्रीमान्हरू कस्ता होलान् ? अनि पैसाकै लागि श्रीमान्ले अरू केटाहरूसँग जे जे गर्नु भनेको छ त्यही त्यही गर्ने श्रीमतीहरू कस्ता होलान् ? काभ्रेमा घ’टेका केही घ’टनाले समाजको पछिल्लो रूपको चि’त्रण गरेको छ ।
घ’टना २०७७ भाद्र २४ गतेको हो । राति ९ बजे पाँचखाल नगरपालिका–१२ घर भएका २२ वर्षीय राजकुमार दनुवारलाई धुलिखेल नगरपालिका–४ स्थित २८ किलोमा डे’रा लिएर बस्ने ३–४ जना युवाको समूहले अ’पहरण गरेको सूचना प्रहरीले पायो । ५० हजार माग गर्ने उक्त समूह रा’ति फ’रार भयो तर अ’पहरणमा पर्ने राजकुमारको उ’द्दार भयो।
श्रीमानहरूकै योजनामा उमा र सविनाले अ’पहरण गर्न थालेको केही महिना भइसकेको छ । राजकुमार र सविनाको मोबाइलमार्फत चिनजान भएको हो । च्या’ट ग’र्दागर्दै शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्ने प्रस्ताव सविनाले राखिन्।
पैसा नआउञ्जेल उनीहरूले राजकुमारलाई शौचालयमा थु’नेका थिए । ५० हजार तयार भएपछि दाजुले प्रहरीलाई सूचना दिए । प्रहरी र उनीहरू पैसा बोकेर २८ किलो माथिको जंगलमा पुगे । प्रहरी सादा पोशाकमा थिए । तैपनि उनीहरूले धेरै मान्छे भएर चा’ल पाए ।झ्या’ङ नजिकै पैसा राखिदिनु भनेकाले पैसा राखिदिएर फर्कंदा उनीहरू फ’रार भए । प्रहरीले एक जना मान्छेलाई देख्यो तर समा’उन सम्भव भएन।
राजकुमारको उ’द्धार भयो । भदौ २५ गते बिहानदेखि नै प्रहरीले पि’छा गरिरह्यो ।इन्स्पेक्टर सुरेश खत्रीको कमा’ण्डमा रहेको प्रहरीले साँझ ७ बजे उनीहरूको समूह भर्खरै डेरा सरेर नयाँ घरमा आएको खबर प्रहरीले पाए । प्रहरी पुग्दा उनीहरू घरभित्र चुकु’ल लगाएर खु’कुरीसहित तयारी अवस्थामा थिए ।
भदौ २६ गते शुक्रबार प्रहरीले उमा परियारलाई कोठाबाटै नि’यन्त्रणमा लिएको छ । उनका श्रीमान् र भाइ फ’रार छन् ।आफ्नै श्रीमतीलाई अरूसँग कुरा गराएर यौ’न स’म्पर्कका लागि तयार भएपछि रकम बा’र्गेनिङ गर्ने र रकम नदिए अप’हरण गरी मा’रिदिने ध’न्दा यस्तरी फ’स्टाएको हो । ल’कडाउनले काम गर्ने वातावरण छैन । काम गर्दा पनि आम्दानी छैन । अनि श्रीमान–श्रीमती नै पैसा कमाउन गलत ध’न्दामा लाग्न थालेको खबर जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ ।
भोलिदेखि १४ जिल्लामा स्कुल ब’न्द नगरे लकडाउन!
महिनावारी हुँदा बिदा दिने नियम लागु हुने?महिलाहरुले अवश्य हेर्नुहोला।